I-39% yabathengisi be-Forex Inenzuzo | Ibhulogi ye-FXCC
Jan 31 • Ukuthengiswa Kwama-Forex Izihloko • Ukubuka kwe-134119 • 45 Amazwana Ku-3945 Kwabahwebi Besikhathi Esibikezelayo Kunenzuzo
Ngithemba ukuthi ungumfundi olungile, ngemuva kwalokho konke okumele kube khona ukushaqeka okukhulu. Manje usuzikhiphe phansi, emva kokufunda isihloko sesihloko, okuyinto eyiqiniso (kahle kinda), sizohlala ngendaba ekhona; kungani abaningi belahlekelwa ekuhwebeni forex futhi yiziphi izinguquko abaningi okufanele benze ukuze kube kuleso siphezulu amane amaphesenti abawinile?
Kulungile, ngaphambi kokuba siqhubeke noma kunjalo, ake siqale sibhekane ne-39% yokucaphuna abadayisi bokuwina. Iqiniso lifika njengesihlonipho se-forexmagnates ku-redux lite version yayo yombiko ohlanganisa inzuzo nokusebenza kwe-forex brokers yase-USA esekelwe. Inani elihamba phambili liyi-39.1% yenzuzo yamakhasimende kusuka kumthengisi owayene-akhawunti ye-24,000 esebenzayo. Kukhona nezinye izitayela ezithakazelisayo zolwazi okufanele zibonakale ngaphambi kokuba siqhubeke.
Kube nokuwa kweqile kwinani lama-akhawunti namanqanaba omsebenzi ku-2011 kuyilapho amaphesenti wabathengisi abazuzayo abanda. Lokhu kungase kusiphakamise amaphuzu ambalwa athakazelisayo, okokuqala sihlangana ndawonye ngokuhle kulokho esikwenzayo? Noma (futhi akuhambisani ngokukhethekile) baningi 'be-amateurs' abashiye i-arena, babuyele emsebenzini wosuku, beshiya izinombolo ukuba zithuthukiswe ngabadayisi abaphakeme noma abaqeqeshiwe? Okubaluleke nakakhulu ukuthi inani labathengisi liye lahleka, kuphela abahwebi abakhulu kakhulu abasizwa amafemu ahambisanayo okulawulayo azokhula.
Inombolo yama-forex ama-akhawunti abanjwe nabakwa-US forex brokers awela ngaphezulu kwe-11,000 kuze kube sonke isikhathi se-97,206
Inzuzo yabathengi iphakama i-6.4% ngokwesilinganiso, isigaba sesibili esilandelayo sokuthi inzuzo ingcono
Imbonini ye-forex yase-United States manje ibonisa izimpawu ezibonakalayo zokunciphisa, inani lama-akhawunti angabonakali ekuthengiseni ama-forex asebanjwe nabakwa-US abasebenza ngokuthengisa abadayisi phansi ukurekhoda i-97,206, inani eliphansi kunazo zonke elibikwe kusukela ku-Q3 2010 lapho kuqala umbiko onjalo. Isimo sezulu esiphezulu senze kube nzima kakhulu kwabathengi baseMelika ukuheha amakhasimende amasha. Kodwa-ke, ngaphandle kwamakhasimende ayishumi aphezulu we-forex abhale izinga eliphansi kakhulu elirekhodiwe lokuzuza laliphakathi kwe-32%.
Kuyathakazelisa ukuthi bangaki kithi abazokwamukela isibopho sokukhanyisa esimisweni sethu sokuqala uma sishaywa uhlobo lomdwebo oholele lesi sihloko. Angiyedwa lapho ngithatha 'ebusweni bokubheka' ezinye idatha kanye nezicabango eziza ngendlela yethu njengabahwebi be-forex. Ngokwemvelo ngangazi ukuthi umdwebo ongakabonakali uvame ukuphonswa emaforamu okuhweba; ukuthi kuphela i-10% yabathengisi inzuzo, yayingenasisekelo.
Njengoba bebuzwe emkhakheni womqondisi futhi bafunde umbiko obanzi wezocwaningomali, ukulinganiselwa okuphumelelayo kulinganiselwa ku-20%, kabili ukucabanga kwangaphambilini, kodwa i-39% ngokuqinisekile yayithatha abaningi ngokumangalelwa ngesikhathi sokuqala ishicilelwe, ngisho nangaphezulu ukuze phezulu Abathengisi abayishumi base-USA banamakhasimende ajabulele izinga lokuphumelela le-32%. Kodwa-ke, kukhona i-caveat, isibalo sami samaphesenti angu-20 sibandakanya ukusabalaliswa kwebhethri okungenzeka ukuthi kunomlando wokuba abadayisi ababi kakhulu (ngokukhululeka) kunabathengisi be-forex abahlanzekile, inkolelo efanelekile yokuhlola ngosuku olwedlule.
Umbuzo ovame ukuphakanyiswa yilolu hlobo lwamazinga okuphumelela "Ingamaphesenti amancane abahwebi abaphumelelayo abahlanekezela lezi zibalo?" Kodwa amaphesenti amaningi, isilinganiso kanye nokusabalalisa kwedatha engahleliwe akusebenzi njengaleyo, futhi kufanele sazi kakade ukuthi laba abadayisi. Uma i-40% yamabhizinisi inenzuzo ngakho isibalo samaphesenti abathengisi abaqobo abazuzisa sizobe sisondelene nalolo nani.
Esigabeni sokuqala sabuza umbuzo ukuthi kungani abathengi abaningi kangaka bengenanzuzo? Uhlomile ngalolu lwazi olusha ngizibuza ukuthi lokho kucabangela akufanele kuhlolwe ngokuningiliziwe. Okokuqala, kusukela ku-akhawunti ye-97,000 ephilayo egcinwe e-USA cishe ingxenye eyodwa kwezintathu inenzuzo, manje akubona bonke laba abanikazi be-akhawunti abazoba ngabasebenzi abazinikezele isikhathi esiphezulu sokusebenza, amanye ama-akhawunti azosetshenziselwa 'ama-punting' ama-akhawunti, abantu ababheja ngokuphambene nokuhweba (futhi singagcina ingxoxo ebonakalayo ye-cerebral umahluko ngenye isikhathi).
Akunakwenzeka ukulinganisa lokho kwehluleka kwezinombolo zangempela zabathengisi abazuzayo kusuka kolwazi nedatha, kodwa isibalo esingenhla i-50% sizoba ukubheja ngokuphephile futhi masithathe nje i-logic yethu isiteji esiqhubekayo; ukuze kube yisikhathi esigcwele, (isikhathi esithile), iningi lalizofanele libe nenzuzo, kungenjalo bekungaba lula ukuyeka umsebenzi. Kuyathakazelisa ukuthi uqaphele ukuthi sisuke sisuka kuphi kule fantasy i-10% isibalo ngokucubungula kakhulu into encane yedatha (ehloliwe).
Kunesinye isici salolu mpikiswano ekuphumeleleni okumele kukhulunywe ngakho, mhlawumbe ukusekela umbono wokuthi i-FX iyindawo engcono kakhulu yokudayisa kuyo. Uma impumelelo enkulu yokuhweba isondela ku-20%, kodwa amaklayenti ayishumi e-USA FX abathengi bonke ngaphezu kwe-32%, ingabe sisuke sithunyelwa umlayezo obala lapho? Uma ufuna ukuthuthukisa amathuba okuba ngumthengisi onenzuzo bese uhweba u-FX ngaphezu kwamasheya, noma izinkampani bese ucabangela ukusebenzisa (ngingaqapheli ngikusho) umthengisi we-ECN / STP njengoFXCC.
Nakhu ukuthatha kwami ​​ukuthatha izinga elingaphezulu lomuntu ukukhuluma; Ngenqaba ukwamukela ukuthi noma ngubani oye wadlula izinkinga zami zobuhlungu eminyakeni emihlanu eyedlule noma ngaphezulu, ngubani oye wafinyelela ekugqibeleni kokuthola engangikutholile kwakuphoqelekile ukuba abe ngumthengisi wangaphambili we-forex, angayikuphumelela ekugcineni futhi ngokuphumelela ngiphakamisa i-metric yokuthatha umholo ovamile noma onengqondo noma ukubuyiselwa kwezimali zokuthengisa emakethe ye-forex. Futhi njengoba ngishilo ngezikhathi eziningi ngaphandle kokuthi uhlasele isikhathi sethu esigcwele 'inselela enkulu' ngeke uhlale 'ulahla izicathulo' futhi uhwebe isikhathi esithile emfashini owakhelwe emuva, okuwukunethezeka okuvela ekuhlangenwe nakho kuphela.
Buyela embuzweni obhalwe esigabeni sokuqala; "Kungani abaningi kangaka belahlekelwa ekuhwebeni phambili futhi yiziphi izinguquko eziningi okumelwe zenziwe ukuze zibe kuleso siphezulu samaphesenti angu-40?" Ngizokushiya ngezizathu eziyisithupha futhi sicela ukhululeke ukujoyina kubhulogi ngeziphakamiso zakho noma izengezo zakho. Manje angiyikuthi 'ngisebenzise' ngezizathu futhi nginikeze izixazululo, uhlu oluqondile futhi alukho imfumbe, izimpendulo zikhona, isixazululo sibonakala.
Kodwa okokuqala ukubuyisela kabusha, uma kuvaliwe ngamaphesenti angu-40 abahwebi baphumelela ngakho impumelelo njengomthengisi we-forex enenzuzo ingase ibe ngaphezu kwalokho ongakucabangela kuqala. Futhi lowo mfanekiso owodwa, ophakeme kakhulu kunokuba abaningi bekulindeleke, kufanele ugcizelelwe njengesikhuthazo sabathengisi abasanda kushayisana.
Izizathu Eziyisithupha Zokuhluleka
Imali ephansi yokuqalisa
Ukuhluleka ukuphatha ingozi
Ukunganaki - ukungabaza uhlelo
Ukuzama ukukhetha izintambo noma amabhodlela
Ukwenqaba ukwamukela ukulahlekelwa
abahwebi abanenzuzoinzuzo yokuhweba
« Ingabe Ukubuyiswa Kwe-Iceland Kubenza Benze I-Real Poster Enye Boy For The Financial Crash? Ingabe Abathengi base-US Bonke Benziwe Ngokuthenga? »